Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विराटनगरमा अझै पनि बालश्रमको प्रयोग – Emountain TV
विराटनगरमा अझै पनि बालश्रमको प्रयोग
विराटनगर, २९ भदौ । कानुनमा १६ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, विराटनगरको मोटरसाईकल पसल, यातायातको क्षेत्रमा अझै वालश्रम प्रयोग भईरहेको छ ।
नेपालमा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भएपनि विराटनरमा अझै प्रयोग भईरहेको हो । गरिब, अभाव र आवश्यक घरायसी वातावरणको अभावले बालबालिकाहरु बाबुआमाबाट अलग्गिएर निकृष्ट प्रकारको श्रम गर्न बाध्य छन् ।
विराटनगरको एक पसलमा मात्रै हैन, यहाँ चोक गल्ली धेरै ठाउँमा बालश्रम प्रयोग भईरहको छ । बालबालिकाहरु स्यंम राजीखुसीले काम गर्न आउने गरेको रोजगातदाताहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा घरमा बस्ने उचित वातावरण नभएपछि बालबालिकाहरु बालश्रम गर्न बाध्य छन् । बालबालिकाहरु थोरै तलवमा काम गर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षले इट्टा उत्पादक, ग्यारेज, होटल लगायतमा काममा लगाउने गरेको महिला तथा बालबालिका शाखा, विराटनगरले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा विराटनगरमा मात्र हैन देशैभरमा वालश्रम प्रयोग वढेको छ । तर, यसलाई न्यूनीकरणका लागि रोजगारतादालाईनै थाहा नभएका कारण पनि यस्तो समस्या भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । यसलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले समेत चासो दिनुपर्ने वेला आएको उनीहरुको भनाई छ ।